साबधान ! बन्दागोभीको तरकारीले लिनसक्छ ज्यान – Entertainment Khabar
साबधान ! बन्दागोभीको तरकारीले लिनसक्छ ज्यान
छोरीले हरेक दिन जस्तो टाउको दुख्यो भनेर गुनासो गर्न थालेपछि आमा बुबालाई यसबारेमा बुझ्न धेरै मुस्किल भइरहेको थियो । आखिर किन उनीहरूको छोरी टाउको दुख्यो भन्छिन् भनेर कुनै भेउ नै पाउन सकेनन् । लगभग ६ महिनादेखि यस्तो चल्दै आएपछि उनीहरू छोरीलाई जँचाउन गए । परीक्षणपछि जब यसको कारण थाहा भयो, उनीहरूले विश्वासै गर्न सकेनन् ।